ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ယူရိုငွေ သန်း ၈၀ အီးယူ အသုံးပြုသွားမယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ယူရိုငွေ သန်း ၈၀ အီးယူ အသုံးပြုသွားမယ်
epa04405047 Roland Kobia, Ambassador for the EU in Myanmar talks during the Third Conference on Media Development in Myanmar atahotel in Yangon, Myanmar, 18 September 2014. Myanmar holds the conference on Media Development on 18 and 19 September 2014 organized by the Ministry of Information and Myanmar Media Development Thematic Working Group in partnership with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and International Media Support. EPA/NYEIN CHAN NAING
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ယူရိုငွေ သန်း ၈၀ အီးယူ အသုံးပြုသွားမယ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် ယူရိုငွေ သန်း ၈၀ (ကျပ်ငွေ ၁၂၀ ထရီလီယံ) အသုံးပြုသွားဖို့ ခွဲဝေသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
သတင်းဓာတ်ပုံ – NYEIN CHAN NAING (EPA/MYANMAR)
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး Mr. Roland Kobia ကို မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာက တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။
ဒီလိုပြောကြားရာမှာတော့ အီးယူရဲ့ အကူအညီတွေကို အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန NRPC , UPDJC နဲ့ JMC စတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရာမှာ အသုံးပြုတာ များတယ်လို့လည်း ပြောကြားလိုက်တာပါ။
ဒါအပြင် ဒုတိယဦးစားပေး အနေနဲ့ ပဋိပက္ခဒေသတွေက လူထုအခြေပြုလုပ်ငန်းတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတွေ မြှင့်တင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အသုံးပြုသွားမယ်လို့လည်း ပြောကြားထားပါတယ်။
Previous articleပဋိပက္ခတွေ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်း ရှိသင့်တယ်လို့ မြောက်ပိုင်း ၇ ဖွဲ့နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သဘောတူ
Next articleန၀တနဲ့ နအဖကောင်စီဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မျိုးညွန့် (ငြိမ်း) ကွယ်လွန်